လူမှုကွန်ယက်များက၎င်းတို့သည်အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးနေသည်ဟုဆိုကြသည် Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 12, 2013 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ငါဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေအားလုံးမှာငါဟန်ချက်ညီအောင်ပြောနေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မလိုက်နာနိုင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်စရာတူကိရိယာများ Viralheat, HubSpot, Hootsuite, Buffer နှင့်အခြားသူများ ဖော်ပြချက်များ၊ တုံ့ပြန်မှုများနှင့်စကားစမြည်ဝိုင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီနေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ဆက်လက်၍ တက်ရန်လုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဟုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ MyLife နှင့် Harris Interactive အဆိုအရကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။
မကြာသေးမီက MyLife သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားစစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအရလူမှုကွန်ယက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်၎င်းတို့စီမံခန့်ခွဲသောလူမှုကွန်ယက်များနှင့်အီးမေးလ်အကောင့်များတိုးပွားလာခြင်းနှင့် ပိုမို၍ လွှမ်းမိုးမှုများပြားလာခြင်းကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသောကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများမှ“ အားလပ်ရက်” ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို့ကြောင့်ပိုမိုကြီးထွားလာနေသည်။
Tags: harris အပြန်အလှန်ငါ့ဘဝမဲပေးပှဲဆိုရှယ်မီဒီယာမန်နေဂျာလူမှုကွန်ယက်လူမှုရေးကွန်ရက်စစ်တမ်း
13:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 36
လူမှုကွန်ရက်တွေအကြောင်း စိတ်ကူးသစ်တွေ လွှမ်းနေတာ!! ဤနေရာတွင် ကောင်းမွန်သော အလုပ်နှင့် အကြံဥာဏ်များကို မျှဝေပါသည်။ မင်းရဲ့တင်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းမိုက်တယ်!!
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် 2014 ခုနှစ် ညနေ 12:36 နာရီ
နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များထက် ယနေ့တွင် “အားလပ်ချိန်” မရှိတော့ပါ။ အလုပ်နဲ့အိမ်ကြားက လိုင်းတွေက မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများတွင် ရှိနေပါသည်။ အားလုံး။ ဟိ။ အံ့သြစရာ။ အချိန်။ အရမ်းကောင်းတဲ့အချက်အလက်။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂